I-Fairmont Hot Springs Amakamelo Amabili Okuxhumanisa I-Suite
Itholakala e-Columbia Valley phakathi kwe-Purcell kanye ne-Rocky Mountains, ihhotela lethu e-Fairmont Hot Springs, BC iyindawo yokugcina yokubalekela. Indawo yethu ebanzi inokubukwa kwentaba okumangalisayo, inqwaba yezinsiza ezithokozisayo, kanye nendawo enhle eseduze nazo zonke izindawo ezikhangayo ezihamba phambili.
Itholakala e-Columbia Valley phakathi kwe-Purcell kanye ne-Rocky Mountains, ihhotela lethu e-Fairmont Hot Springs, BC iyindawo yokugcina yokubalekela. Indawo yethu ebanzi inokubukwa kwentaba okumangalisayo, inqwaba yezinsiza ezithokozisayo, kanye nendawo enhle eseduze nazo zonke izindawo ezikhangayo ezihamba phambili. Indawo ngayinye yethu engu-104 yesitayela se-suite inemibhede elingana nenkosi nezinsiza eziningi, okuvumela izivakashi zethu ukuthi ziphumule futhi zijabulele umoya omangalisayo. Amakamelo ethu amabili okulala ama-Suites ngalinye linezindawo zokuhlala ezimbili namakamelo amabili ahlukene. Igumbi ngalinye e-Mountain View Villas lihlome ngekhishi eliwusayizi ophelele, imibhede yenkosi ewusayizi omncane, amasofa akhipha usayizi wendlovukazi, nama-balconi angasese noma amathala avumela izivakashi ukuthi zibuke ukubukwa kwentaba okumangalisayo.
4.47(74 okushiwo abanye)
4.47 · 74 okushiwo abanye